Vakoka fanjonoana ao Taiwan: Trondro sy afo mandihy ambonin’ny ranomasina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2015 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, Français, Italiano, English
Ny Peng Huo Tsai（蹦火仔）na “afo fanintonana” (indraindray adika ihany koa ho “afo solifara”) dia teknikam-panjonoana efa nampiasain'ny vahoaka teratany voalohany tao Taiwan. Amin'ny alina ireo teratany mpanjono ireo no mandrehitra afo amin'ny bararata na hazo ao amin'ny samboon-dry zareo hanintonana ireo trondro milomano hanatona akaiky kokoa ny andian-tsambon-dry zareo.
Voatahiry mandraka ankehitriny ny teknikan'ny etona acetylene ao amin'ny helodranon'i Jinshan ao amin'ny morontsiraka avaratr'i Taiwan. Ny Helodrano dia nampiasaina hitaterana solifara nangonina avy amin'ny tendrombohitra manodidina hatramin'ny fotoana nanapahan'ny espaniola (tanelanelan'ny 1626-1642).
Nalaza tokoa ny afo fanintonana ao amin'ny Hoalan'i Jinshan hatramin'ny fitondra-taranaka Qing ary fanintonan'olona tsy maintsy jerena mandritra ny asara [fotoana mafana] rehefa maro ireo karazan-trondro milomano manodidina ny morontsiraka avaratr'i Taiwan. Nefa efa mihalefy ny teknikam-panjonoana nentin-drazana, raha andian-tsambo efatra sisa no mampiasa io fomba io.
Tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny 31 aogositra dia voasoratra ho anisan'ny lovan-kolontsaina eo ambany fitarihan'ny Departemantany Raharahan-Kolontsaina ao amin'ny Governemantan'ny Tanànan'i Taipei vaovao ny teknikam-panjonoana mampiasa etona acetylene.
Ny mpanao gazety Huei-Jen Lin avy ao amin'ny News Market, tranonkalam-baovao iray mahaleotena, no nanazava hoe naninona ity teknika ity no miaro ny tontolo iainana kokoa:
Efa an-taonany no nianaran'ny Studio Kolontsaina sy Tantara Jinshan ny teknikan'ny fampandihizana afo sy nanampiana tamin'ny fandaminana fitsangatsanganan'ny mpizahatany hiaina ny teknikam-panjonoana sy hahatakarana ny tombontsoany :
Ahoana tsara ny ataon'ny mpanjono hahazoana ny trondro? Naka sary vitsivitsy tamin'ny asa ilay mpanao gazety Huei-Jen Lin avy ao amin'ny News Market ary namelabelatra ny fanaovana azy amin'ny antsipirihany tao amin'ny tatitra nataony.